ny tsy fitovizan'ny modely amin'ny GPS sy ny maodely misy GPS + Cellular | Vaovao IPhone
Ity dia mety ho iray amin'ireo fanontaniana izay azon'ny maro amin'ireo mpampiasa tsy dia mahay loatra eo amin'ny tontolon'ny teknolojia ary indrindra Apple afaka manontany, ary izany no antony hamaliantsika mazava araka izay azo atao momba ny Inona no maha samy hafa ny maodely amin'ny GPS sy ilay maodely misy GPS + Cellular?
Azontsika lazaina avy hatrany fa ny maodely rehetra izay marketing an'i Apple ankehitriny raha ny momba ny Apple Watch dia manana GPS. Tsara izany satria afaka manana isika asa mahaliana noho ity haitao ity sy ny iPhone mifandraika aminay.
1 Inona marina no dikan'ny GPS amin'ny Apple Watch?
2 Inona marina no dikan'ny hoe manana GPS + Cellular?
Inona marina no dikan'ny GPS amin'ny Apple Watch?
Ity haitao izay nampiana avy amin'ny Apple Watch ity dia ahafahantsika manao hetsika toy ny fandefasana sy fandraisana hafatra, famaliana antso ary fandraisana fampandrenesana rehefa mifandray amin'ny famantaranandro amin'ny alàlan'ny Bluetooth sy Wi-Fi ny iPhone. Ary ho fanampin'izany, ny GPS mitambatra izay ananantsika ao amin'ny Apple Watch dia miasa nefa tsy mila ilay iPhone mifandraika handraisam-peo miaraka amina fampiharana ny hetsika lavitra, ny hafainganana ary ny làlan-kaleha izay ataontsika rehefa manao fanazaran-tena isika.
Inona marina no dikan'ny hoe manana GPS + Cellular?
Ny zavatra tsara momba an'ity teknolojia ity dia ankoatry ny fandraketana hetsika ara-batana toy ny ataontsika amin'ireo sisa maodelin'ny orinasa Cupertino, ny Apple Watch miaraka amin'ny GPS + Cellular dia ahafahantsika mandefa sy mandray hafatra, karazana fampandrenesana fanindriana, hamaly ny ho avy antso, fandraisana fampandrenesana, fihainoana Apple Music sy Apple Podcasts (miankina amin'ny firenena) tsy mila mitondra ny iPhone miaraka aminao.
Avy amin'izay azontsika lazaina fa manome fahaleovan-tena ilaina amin'ny famantaranandro miaraka amin'ny nomeraon-telefaonantsika hahafahana mandao ny iPhone an-trano. Aorian'ny herintaona dia misy io safidy io eto amin'ny firenentsika misaotra ny fifampiraharahana teo amin'ny Apple sy ny mpandraharaha Orange sy Vodafone. Amin'izao fotoana izao dia izy ireo ihany no mpandraharaha roa izay hanolotra an'ity serivisy ity ho an'ireo mpampiasa ny Apple Watch GPS + Cellular, afaka kelikely dia azo antoka fa handray anjara ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Inona no maha samy hafa ny maodely amin'ny GPS sy ilay maodely misy GPS + Cellular?
JAVIER HERNANDEZ GUZMAN dia hoy izy:
Miasa ety ivelany aho ary tsy tiako ny mameno ny iPhone, tena ilaina tokoa ny famantaranandro paoma
Valio amin'i JAVIER HERNANDEZ GUZMAN
Inona ny halavirana faran'izay avo lenta tokony hananan'ny telefaona wactch raha tsy misy tamba-jotra Wi-Fi, noho ny fifandraisana Bluetooth?
yt.marat292 dia hoy izy:
Tena tiako ilay marika paoma, raha tianao ny iray dia hovelariko ao amin'ny kaontiko instagram izany, raha te hanaraka ahy ianao ary handefa ahy mivantana, dia hamaly anao aho @ yt.marat292
Valio amin'i yt.marat292
Encarni dia hoy izy:
Fampahalalana tena ilaina. Thankssss
Valiny amin'i Encarni
Vao nividy famantaranandro paoma tamin'ny alàlan'ny amazon aho, andiany 4 manokana tamin'ny finday, fa ny telefaona ananako dia huawei 20 pro. Hiara-miasa amin'ity telefaona ity ny famantaranandroko. Olona 72 taona aho ary na dia manandrana manaraka ny daty aza aho, ny tena marina dia tsy dia azoko loatra.
Raha misy afaka manampy ahy dia tiako izany.
ho tonga amin'ny alahady 18 ny famantaranandro
Salama Agustin. Hatreto dia tsy mifanaraka amin'ny rafitra fiasa Android ny fijerin'i Apple.
Ny NFC an'ny iPhone XS, XS Max ary XR dia nisokatra kely kokoa
Tonga amin'ny iPhone XS, iPhone XS Max ary iPhone XR vaovao ho an'ny rehetra ny eSIM